Tsy Manaiky Ny Hamerenana Indray Ny Tolotra Eurobond Ataon’ Ny Governemanta Ny Mpanao Fihetsiketsehana Makedoniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jolay 2016 6:18 GMT
Tamin'ny voalohandohan'ny volana Jolay, nanambara drafitra hamoaka (trosa) Eurobond vaovao ny governemanta Makedoniana izay mitentina 650 tapitrisa euros (720 tapitrisa $ ), ary nilaza fa ho fampitomboana ny fampiasam-bola no anton'ny fanapahan-kevitra. Nitsikera ny drafitra ny solontenan'ny antoko mpanohitra SDSM sy ny hetsika fantatra amin'ny anarana hoe “Revolisiona Maro Loko” ary nilaza fa ho lany amin'ny kolikoly ny trosa raha mbola eo amin'ny fahefana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao .
Hoy ny lahatsoratra iray ao amin'ny pejy Facebook-n'ny Revolisiona Maro Loko :
Hatsikana iray ao amin'ny rakitsary Facebook mampahafantatra ny vahoaka momba ny totalin'ny vola sy ny adidy rehetra amin'ny Eurobond izay navoakan'ny governemanta Makedoniana. Sary: pejy Facebook “Javen dolg” (Trosam-bahoaka). nahazoana alàlana.
Nizara sary-sy-soratra tao amin'ny media sosialy mifototra amin'ny fanambarana toy ny hoe “tsy atao amin'ny anarako” ireo mpisera tao amin'ny aterineto ary nampitandrina ireo mpitrosa matanjaka fa tsy hiloloha ny trosa ataon'ny governemantan'ny lehiben'ny antoko, Nikola Gruevski, izy ireo sy ny zanany. Efa nahasarika sonia maherin'ny 3.100 tamin'ny fotoana nanoratana ny fanangonan-tsonia an-tserasera tao amin'ny Change.org izay manambara hoe “:tsy manaiky ny trosa aho ary mandà ny adidy rehetra mba hamerenana izany amin'ny maha-olom-pirenena tompon'andraikitra ahy” .
Niezaka ny ho tonga tao amin'ny Minisiteran'ny Vola ireo mpanao hetsi-panoherana, saingy nisy polisy manokana nanakana ny fidirana rehetra mankany amin'ny faritra foiben'i Skopje. (Eo akaikin'ny tranobe be valo rihana foiben'ny antoko eo amin'ny fitondrana, VMRO-DPMNE ny Minisiteran’ ny vola .)
Eo ambany fahirano virtoaly ny faritra iray manontolo, misy mpanofa ny efitra sasany amin'izany ary voarara tsy mahazo miditra na mivoaka ny tranony ireo mpanofa. Tsy nanazava na niezaka ny hanamarina ny antony hamerana ny fivezivezena ao amin'ny toerana ny polisy.
Nandritra ny alina, tsy nety niparitaka ireo mpanao fihetsiketsehana na dia teo aza ny ezaka nataon'ny polisy mba hampitsaharana ny fihetsiketsehana, ary nahavita namaky ny sakan'ny polisy izy ireo ny farany. Niala ireo polisy nony avy eo ary namela ireo mpanao hetsi-panoherana hanatona ny faritry ny Ministeran'ny vola.
Nihaona tamin'ny vondrona mpiray tanindrazana aminy tany ivelan'ny tranoben'ny Ministeran'ny vola ireo mpikatroka izay nahavita niditra ny toerana tsy nandalo sakan'ny polisy tamin'ny alàlan'ny fihodinana tany amin'ny garazy ary efa voahodidina polisy ireo vondrona ireo eo ampanaovana fitokonana. Niara-nandoko ny rindrina ivelan'ny Minisiteran'ny vola ireo vondrona roa rehefa tafahaona ary nihiaka sy nihira hira (anisan'izany ny hiram-pirenena Makedoniana).
Zavatra toy ny lohahevitra fady ao Makedonia ny trosam-panjakana. Koa satria niezaka ny hitazona ny fandrosoana ara-toekarena nandritra ny taompolo maro ny governemanta dia niantehitra hatrany tamin'ny findramam-bola avy any ivelan'ny firenena izy mba hanohanana ara-bola ireo biraom-panjakana. Nitaraina ny mpanao tsikera fa miantoka ny fahombiazan'ny governemanta ankehitriny amin'ny fifidianana ny famatsiam-bola amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny fahatokisan'ireo vondron'olona mpifidy.
Milaza ihany koa ireo fikambanana tsy miankina miady amin'ny kolikoly fa famotsiam-bola sy halatra ny ankamaroan'ny fandaniambolam-panjakana ao Makedonia, anisan'izany ny fandaniana mihoampampana ho an'ny tetikasa lehibe novatsian'ny mpandoa hetra vola toy ny tetikasa Skopje 2014 , izay mitentina 640 tapitrisa euros (708 tapitrisa $ ) raha kely indrindra . Araka ny fanadihadian'ny mpanao gazety Xhelal Neziri, fara fahakeliny 5 arivo tapitrisa dolara (4,5 lavitrisa euros) no nalaina avy tao amin'ny firenena noho ny kolikoly nandritra ny taompolo farany.